ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ အစည်းအဝေးတွင် ဒေါက်တာအေးမောင် နုတ်ထွက်စာ တင်ခြင်းကို ဆွေးနွေးမည် - Yangon Media Group
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ အစည်းအဝေးတွင် ဒေါက်တာအေးမောင် နုတ်ထွက်စာ တင်ခြင်းကို ဆွေးနွေးမည်
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေး မောင် နုတ်ထွက်စာတင်ထားခြင်းကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်မည့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဗဟို ကော်မတီ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြို့နယ်ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်မှ ၇ ရက်နေ့အထိ လေးရက်တာကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်အတွက် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ရက်စွဲ ဖြင့် အကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်ထားပြီး အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် စာတမ်းဖတ်ကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိသည်။ ”လုပ်ဆောင်မယ့်အကြောင်း အရာတွေကတော့ အကြောင်းကြား စာထုတ်ပြန်ချက်ထဲကအတိုင်းပါပဲ။ ဒေါက်တာအေးမောင် နုတ်ထွက်စာတင်ထားတဲ့ကိစ္စက ပါတီကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် ဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာ ပါမှာပေါ့”ဟု ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အေးနုစိန်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်က ပြောသည်။ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ဆွေးနွေးကာ ဆုံးဖြတ်ချက်မည်သို့ချရန်ရည်မှန်း ထားသည်ကိုမူ ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိ သေးကြောင်း ဒေါ်အေးနုစိန်က ထပ်လောင်းပြောသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမြို့နယ် ကိုယ်စားပြုစာတမ်းဖတ်ကြားခြင်းတွင်မူ ပါဝင်ရမည့်အကြံပြုချက်များ အနေဖြင့် ရခိုင်အမျိုးသားနိုင်ငံရေး နှင့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်အကြံပြုချက်၊ ပါတီကျစ်လစ်ခိုင်မာရေးနှင့် ပါတီတည် ဆောက်ရေးအကြံပြုချက်၊ ဘင်္ဂါလီများကို ပြန်လည်နေရာချထားရေး နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင်လုံနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြံပြုချက်စသည်တို့ပါဝင် သော အကြံပြုစာတမ်းဖတ်ကြားရ မည်ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်သည် ပါတီမှနုတ်ထွက်ခွင့်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ရေးသားကာ ပါတီသို့တင်ပြထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏နုတ်ထွက်စာတွင် ပါတီတွင်း မညီညွတ်မှုများ၊ နည်းမျိုးစုံနှင့် တိုက်ခိုက်ခံရမှုများကြောင့်ဟု ဖော် ပြထားသည်။
သာစည်မြို့နယ်တွင် ခရီးသည် အမျိုးသား နှစ်ဦးထံမှ တန်ဖိုးငွေကျပ် ၄၃၂ သိန်း တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းစ?
၁၅ ပွဲဆက်နိုင်ခဲ့သော အသင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် မန်စီးတီးအသင်း နည်းပြ ဂွါဒီယိုလာ ကျေနပ်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကို ဌာနပိုင်မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော် အစည်းအဝေး အသွားအပြန်
ရေနံချောင်းမြို့မှ ပျောက်ဆုံးနေသော ရှေးဟောင်းဘုရား ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူကို မြဝတီမြို့တွင်ေ?
မန္တလေးမြို့တွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ အရောင်းအဝယ် သွက်လာပြီး ငှားရမ်းရန် စုံစမ်းမှုများ ယခင်လ
အောင်လံမြို့ ပြည်လမ်းမတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွား၊ လူတစ်ဦးသေဆုံး